Umbuzo ngokuthi indlela yokwenza rose kusuka napkins ngezandla zabo, ngokuvamile kwenzeka intsha, abafuna ukuzenzela ekhethekile umngane womshado umphefumulo. Ayikho into enhle ezingaphezu kuka ukunikeza izimbali wakhe. Futhi uma izimbali emehlweni akhe kwenziwa izindlela ngokurhaba, umphumela isenzo esinjalo esingabathinta ukudlula zonke izinto ozilindele kuyo. Into esemqoka - it is a ukumangala ubukhazikhazi. Futhi ke konke kuyoba nje ephelele. Okunge ngaphandle nezincwadi okusekelwe futhi izandla zakho ngeke kudingeke. Eqinisweni, ukwazi kanjani ukwenza rose kusuka napkins ngezandla zabo, kuzothatha esingaphansi komzuzu, futhi akukho nzima ngalo. Ngakho nje khumbula womshini algorithm - futhi ungakwazi ngezikhathi ukuyisebenzisa kuzobazuzisa.
Une usuku romantic. Ingabe ufuna intombi yakho ukuze wenze into ekhethekile, kodwa kwenkinga. Uyaqonda ukuthi kubalulekile ukuba athathe isinyathelo ukuze nginqande leso simo. Kodwa manje yini? Bese kuthi-ke Impendulo isobala - ukuyinika into kungaphezu. Futhi esinye salezi izakhi iyona rose, okuyinto baphehla phambi lover yakho. Kungakhathaliseki ukuthi impahla kanye kahle kanjani uyabulawa.
Liphuzu lelibalulekile okufanele ephawulekayo nezinye wakho ukuletha kumnandi ngempela futhi uqinisekise imizwa yakho. Ngakho ake uthole indlela yokwenza rose kusuka napkins ngezandla zabo, futhi yini izinto ke kangcono.
Indaba ukusetshenziselwa lokhu kungahlobani nanoma yimaphi yezandla indwangu. Kubalulekile kuphela ukuthi isikwele umumo (sekulula ukwenza). Ngenhlanhla, eminingi yale mikhiqizo zenziwa ngaleyo ndlela. inketho Okugcwele - a billet elingunxande. Yiqiniso, kungcono uma kuba uvalwe - izonikeza imbali eziqine kakhudlwana. Kodwa uma kukhona soft, khona-ke ungakhathazeki khona: kusukela napkins zingenziwa iyiphi amandla wavuka.
Kungcono uma kwenziwa ebhentshini noma itafula. Kodwa ngisho idolo elula kufanelekile le njongo. Thatha izinto kuvuna futhi zenzeka ke ngokuphelele. Khetha noma iyiphi amaqembu. Yikuphi umuntu abheke kuwe, futhi baqala round. Kuyinto kudingekile kuphela kancane ukugoqa ukuze uthole ekupheleni ngokwanele ezihambisanayo. Omunye emakhoneni futhi evala efanayo onesandla efanayo. Ngaphezu kwalokho, bonke ukuqala nokuwashwa ukugumbuqela ngalapha, lapho engela abephule. Ngokusebenza okungcono ngohlangothi iphathwa ongabeka umunwe futhi sasenza emzungezile. Sifikile onqenqemeni. Sithola umunwe. Sikala out ubude ihlumela futhi luthe ukuqina, twirl okusele. It kuvela isiqu, elibamba imbali. Futhi twirl Friend, kuse ecaleni phansi. Uma wayefisa, phansi zingahlukaniswa zibe isiqu bese wenza uhlobo ithebhu. Lonke algorithm zendlela yokwenza rose aphume usula, iphelile futhi umphumela - imbali wenza lokho ususondele. Manje ungakwazi ukunikeza Kulokhu engiyithandayo yobuciko eyenziwe umuntu.
Kulesi sihloko sichaza indlela ukwenza rose kusuka napkins ngezandla zabo. Ukuthuthukiswa lo msebenzi ngeke uthathe Ningabizi lutho ngaphezu kwemizuzu emihlanu. Kodwa ngesikhathi esifanayo uyoba "isikhali ezengeziwe", okuyinto kwezinye izimo zingase zishintshe ukulingana kwamandla esivuna yakho.
Ukukhetha namabala ingilazi upende
Decoupage amabhokisi - workshop
Amaholide Bulgaria kusuka Chisinau: izimvume kwenye indawo isuke esikhungweni inkampani yokulungisela abahambayo Russian
Ukuqubuka ingane ukushisa noma yokungezwani komzimba? Indlela ukuhlukanisa.
Tile Ceramic ngoba izibuya: okukhethayo enhle
Izidakamizwa "Nemozol" nge giardiasis